Amin'izao fotoana izao, ny fanaovana saron-tava fitsaboana dia heverina ho iray amin'ireo fomba mahomby hisorohana ny fiparitahan'ny COVID-19. Na izany aza, maro ny mason-tava.
Karazan-tava isan-karazany dia afaka manakana ny COVID-19 mahomby toy ny KN95. Raha toa ny mpiasa ara-pitsaboana sy ny olona iray izay matetika miditra amin'ny faritra misy risika dia tokony hanao saron-tava fitsaboana izy ireo.
Ny "N" dia mamaritra ny olan'ny sombin-javatra tsy misy menaka. ”95 ″ dia ny haavon'ny fiarovana kely indrindra amin'ny 95%. Ny KN95 dia afaka manome fiarovana tsara kokoa amin'ny fiainana andavan'andro.
Ireo mpihaino tsy misy fofona-pofonaana dia afaka arovana amin'ny lafiny roa. Samy tokony handrefesana ny saron-tava ny fitrandrahana sy ny lany.
Misy mason-tava miloko fomba famonosana. Ny mpampiasa dia afaka miaro ny tenany ihany.Tsy afaka miaro ny olona manodidina.
Noho izany, voalaza fa ny olona dia manao saron-tava nefa tsy misarona valva. Any amin'ny faritra be olona, ​​azo atao mandritra ny iray andro ny saron-tava eo ambonin'ny haavon'ny KN95, ary ny mason-tavy N95 dia tsy azo ampiasaina intsony rehefa esorina. Ny fotoana faran'izay tsara indrindra amin'ny fampiasana saron-tava fandidiana dia maharitra 4 ora, ary tokony hosoloina avy hatrany izy ireo rehefa avy mando.